Alshabaab oo sheegay inay ku toogteen Buulomareer sarkaalkii Faransiiska ahaa ee Dennis Allex – idalenews.com
Ururka Alshabaab ayaa shaaciyay in ay ku toogteen xalay deegaanka Buulo Mareer Dennis Allex oo ahaa muwaadin u dhashay dalka faransiiska oo muddo ka badan saddex sano ah afduub u haysteen.
Barta Twitterka ay Alshabaab leedahay ayaa lagu sheegay in xalay 7:30 fiidnimo ay toogteen Allex oo hore ay u sheegeen inay dilayaan. Waxayna warbaahinta Alshabaab sheegtay inay soo bandhigi doonaan cadeymo ku saabsan dilka Allex.
Hase yeeshee ururka Alshabaab ayaan soo bandhigin wax cadeymo ahoo ku saabsan dilka ninkan,waxaana dowlada Faransiisku ay hore u sheegeen in howlgalkii ay ku qaadeen deegaanka Buulo Mareer ay ururka Alshabaab ku qaarijiyeen Dennis Allex oo ay ciidamada Komandooska Faransiiska doonayeen inay soo badbaadiyaan.
Ururka Alshabaab aya hore u soo bandhigay muuqaalka askari la sheegay in uu yahay Faransiis oo ka mid ahaa ciidamadii Faransiiska ahaa ee weeraray deegaanka Buulo Mareer.
Warsaxaafadeed ay dhowaan soo saareen ururka Alshabaab ayaa waxa ay ku sheegeen in hore wadahadalo ay u dhex mareen dowlada Faransiiska iyadoo wadahadaladaana ay ahaayeenkuwo la doonayay in lagu sii daayo sarkaalkan ka tirsanaa dowlada faransiiska oo laga afduubtay hotel ku yaal magaalada Muqdisho.